Lead poisoning (ခဲဆိပ်သင့်ခြင်း) - Hello Sayarwon
Lead poisoning (ခဲဆိပ်သင့်ခြင်း)
Dr. Sandy Kyaw မှ ရေးသားသည်။ 15/02/2018 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
Lead poisoning (ခဲဆိပ်သင့်ခြင်း) ကဘာလဲ။
ခဲဆိပ်သင့်ခြင်းဆိုတာ ခန္ဓါကိုယ်ထဲမှာ ခဲဓါတ်တွေစုနေတာ တွေ့ရတာကိုခေါ်ပြီး ၎င်းက လတို့ နှစ်တို့ချီအောင်ကြာပြီးမှဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ခဲဓါတ်ပမာဏ အနည်းငယ်ကနေလည်း တအားဆိုးရွားတဲ့ကျန်းမာရေးပြသနာတွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် ၆နှစ်အောက်ငယ်တဲ့ကလေးတွေမှာ ခဲဆိပ်သင့်ခြင်းကို ခံနိုင်ရည်မရှိကြပါဘူး။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံဖြိုးမှု နဲ့ ကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံဖြိုးမှုတို့မှာ ဆိုးရွားစွာထိခိုက်နိုင်လို့ဖြစ်ပါတယ်။
Lead poisoning (ခဲဆိပ်သင့်ခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ခဲဆိပ်သင့်ခြင်းက အတွေ့ရများပါတယ်။ အသက် ၁နှစ်ကနေ ၅နှစ်အတွင်း ကလေး ၄၀မှာ ၁ယောက်က သွေးထဲမှာ ခဲဓါတ်ပမာဏ5µg/dl လောက်ရှိလို့ အန္တရာယ် မကင်းတဲ့ပမာဏလောက်ရောက်နေတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။
Lead poisoning (ခဲဆိပ်သင့်ခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
-လူ့ခန္ဓါကိုယ်ထဲမှာ တော်တော်မြင့်တဲ့ခဲဓါတ်ပမာဏရှိနေပေမယ့် စစချင်းမှာတော့ ခဲဆိပ်သင့်တယ်လို့ ဖော်ထုတ်ဖို့ခက်ခဲတတ်ပါတယ်။ ရောဂါလက္ခဏာတွေ ခံစားရတာတွေက အန္တရာယ်များတဲ့ခဲဓါတ်ပမာဏလောက်ထိစုနေတာတောင် များသောအားဖြင့်မပေါ်လာတတ်တာတွေရှိပါတယ်။
ကလေးတွေမှာတွေ့ရတတ်တဲ့ ခဲဆိပ်သင့်ခြင်း လက္ခဏာများ
ကလေးတွေမှာတွေ့ရတတ်တဲ့ ခဲဆိပ်သင့်ခြင်း လက္ခဏာတွေမှာပါဝင်တာတွေကတော့-
ဖွံဖြိ ုးမှု နောက်ကျခြင်း
မမွေးခင်ကတည်းက ခဲဓါတ်နဲ့ထိတွေ့ပြီး မွေးလာခဲ့ရင်
ကလေးတွေက လူကြီးတွေထက် ပိုအန္တရာယ်များများခဲဆိပ်သင့်တတ်ပေမယ့် လူကြီးတွေမှာလည်း အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။ လူကြီးတွေမှာ တွေ့ရတဲ့ ခဲဆိပ်သင့်ခြင်းရဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့-
(အပေါ်မှာ မပါခဲ့တဲ့ မပြောခဲ့တဲ့ လက္ခဏာတွေရှိပါသေးတယ်။ တကယ်လို့သင်က သိချင်သေးတဲ့ လက္ခဏာတွေရှိခဲ့ပါက သင့်ရဲ့ ဆရာဝန်နဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပါ။)
အပေါ်မှာ ပြောတဲ့ လက္ခဏာတွေ သင့်ဆီရှိခဲ့တယ်ဆိုရင် ဒါမှမဟုတ် မေးခွန်းမေးစရာတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုပါက သင့်ရဲ့ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။ လူတိုင်းရဲ့ခန္ဓါကိုယ်က ပုံစံမတူစွာတုံ့ပြန်တတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် သင်နဲ့ ဘယ်အရာက အဆင်ပြေဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတာကို သင့်ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်းက အကောင်းဆုံးပါပဲ။
Lead poisoning (ခဲဆိပ်သင့်ခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ခဲဆိပ်သင့်ခြင်းဆိုတာ ခဲကိုမျိုချတဲ့အခါ မျိုးမှာဖြစ်ပွားတတ်ပါတယ်။ ခဲအမှုန်ပါတာတွေရှုမိတဲ့အခါမှာလည်း ခဲဆိပ်သင့်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ခဲဓါတ်ကို အနံ့ရှုကြည့်ခြင်း ဒါမှမဟုတ် အရသာခံရင်း နဲ့မပြောနိုင်ပါဘူး ပြီးတော့ သာမန်မျက်စိနဲ့လည်း ခဲဓါတ်ကိုမမြင်ရပါဘူး။
United States မှာတော့ ခဲဓါတ်ကို အိမ်သုတ်ဆေးတွေနဲ့ ဓါတ်ဆီတွေမှာ အတွေ့ရများခဲ့ပါတယ်။ အခုတော့ဒီပစ္စည်းတွေကိုခဲဓါတ်နဲ့ ဆက်လက်မထုတ်လုပ်တော့ပါဘူး။ သို့သော်လည်းခဲဓါတ်ကို နေရာတကာမှာ ပါနေတွေ့နေရပါသေးတယ်။ အထူးသဖြင့် အိမ်ဟောင်းအိမ်အိုတွေမှာ တွေ့ရတတ်ပါတယ်။
၁၉၇၆မတိုင်ခင် ဆေးသုတ်ထားတဲ့အရုပ်များနဲ့ အိမ်သုံးပစ္စ်းများ
ကျည်ဆံများ၊ငါးဖမ်းပိုက်ခဲသီး၊လိုက်ကာ အလေးများကိုခဲနဲ့ပြ ုလုပ်ထားတာပါ။
ရေပိုက်တွေ ရေအင်တုံတွေ ၎င်းတို့ကရေသောက်ရင်းနဲ့ခဲဓါတ်တွေကိုရလာစေနိုင်ပါတယ်
ကားအိတ်ဇောနဲ့ထိကပ်တဲ့မြေကြီး ဒါမှမဟုတ် အိမ်သုတ်ဆေးများ၊ပန်းချီချယ်ရာမှာသုံးတဲ့ပစ္စည်းများ
Lead poisoning (ခဲဆိပ်သင့်ခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
ခဲဆိပ်သင့်ခြင်းကို ဖြစ်စေမယ့် အန္တရာယ်ရှိတဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။
အသက်အရွယ်၊မွေးကင်းစကလေးငယ်နဲ့ ငယ်တဲ့ကလေးတွေက ပိုပြီးကြီးတဲ့ကလေးတွေထက် ခဲဆိပ်သင့်ခြင်းပိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ နံရံတွေ သစ်သားတွေကကွာကျတဲ့ဆေးတွေကို ဝါးစားခြင်းနဲ့ သူတို့ရဲ့လက်တွေက ခဲမှုန့်တွေနဲ့ကူးစက်စေပြီး ပိုပြီးခဲဆိပ်သင့်စေပါတယ်။
ငယ်ရွယ်တဲ့ကလေးတွေကတော့ ခဲဓါတ်ကို လွယ်လွယ်စုပ်ယူတာမို့ သူတို့ပိုကြီးတဲ့ကလေးတွေနဲ့ လူကြီးတွေထက်စာရင်ပိုအန္တရာယ်ရှိပါတယ်။ အိမ်အိုအိမ်ဟောင်းမှာနေထိုင်ခြင်း။ အိမ်သုတ်ဆေးတွေမှာခဲဓါတ်ထည့်ခြင်းကို ၁၉၇၀ကတည်းက တားမြစ်ထားသော်လည်း အိမ်အဟောင်းတွေ အဆောက်အဦးအဟောင်းတွေမှာ ဒီဆေးတွေရဲ့လက်ကျန်တွေရှိနေနိုင်ပါသေးတယ်။
အိမ်အဟောင်းတွေကိုပြန်ပြ ုပြင်ပြီး နေထိုင်တဲ့လူတွေမှာ ပိုပြီးတော့ အန္တရာယ်များပါတယ်။ တစ်ချို့သော ဝါသနာများ။ လက်ဝတ်လက်စားများပြ ုလုပ်ခြင်း၊ဖန်ပစ္စည်းများပြ ုလုပ်တဲ့အခါမှာ ခဲကိုအသုံးပြ ုဖို့လိုအပ်နိုင်ပါတယ်။ ပရိဘောဂအဟောင်းတွေကိုပြန်လည် မွမ်းမံခြင်းကနေလည်း ခဲဓါတ်ပါတဲ့သုတ်ဆေးတွေကိုထိမိပြီး ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဖွံဖြိုးဆဲနိုင်ငံများမှာနေထိုင်ခြင်း။
ဖွံဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေက ဖွံဖြိုးပြီးသားနိုင်ငံတွေထက် ခဲဓါတ်အသုံးပြ ုမှုကို အရမ်းတင်းကျပ်ထားတဲ့ ဥပဒေနည်းလို့ပါ။ အမေရိကားက မိသားစုတွေက တစ်ခြားနိုင်ငံတွေက ကလေးတစ်ယောက်ကိုမွေးစားမယ်ဆိုရင် အဲ့ကလေးရဲ့သွေးထဲကခဲဓါတ်ကိုစစ်ဖို့သင့်ပါတယ်။ ရွှေ့ပြောင်းသူများနဲ့ အကယ်ဆယ်ခံသူများ ကလေးတွေကိုလည်းစစ်သင့်ပါတယ်။
ခဲဓါတ်က မမွေးသေးတဲ့ကလေးတွေကိုလည်း အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်လို့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်ဝန်ဆောင်တော့မယ့်အမျိုးသမီးတွေဟာ ခဲဓါတ်ထိတွေ့မှုကိုအထူးဂရုပြ ုသတိထားရပါမယ်။
Lead poisoning (ခဲဆိပ်သင့်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ခဲဆိပ်သင့်ခြင်းကို သွေးထဲကခဲဓါတ်ကိုစစ်ဆေးကြည့်ခြင်းနဲ့အဖြေရှာလို့ရပါတယ်။ ပုံမှန်သွေးဖောက်စစ်သလို သွေးနမူနာယူပြီးစမ်းရုံနဲ့ရပါတယ်။ ခဲဓါတ်ဆိုတာ ပတ်ဝန်းကျုင်မှာတင်အတွေ့ရများပါတယ်။
National Institute of Environmental Health Sciences ကတော့ သွေးထဲမှာ ခဲဓါတ်ရှိတာကိုက ဘေးမကင်းဘူးလို့ပြောပါတယ်။ ခဲဓါတ် ၅မိုင်ခရိုဂရမ် လောက်ဆိုရင်ကိုကလေးတွေမှာ တွေ့ခဲ့ရင်ကျန်းမာရေးပြသနာတွေရှိလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
တစ်ခြားစမ်းသပ်မှုတွေအနေနဲ့ သွေးစစ်တဲ့အခါမှာ သွေးထဲမှာ သံဓါတ်ကိုထိန်းသိမ်းတဲ့ဆဲလ်ပမာဏကိုပါစစ်သင့်ပါတယ်။ လိုအပ်ရင် ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်းနဲ့ ရိုးတွင်းခြင်ဆီအသားစယူ စစ်ကြည့်တာတွေလုပ်ရပါမယ်။
Lead poisoning (ခဲဆိပ်သင့်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ပထမဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ကတော့ ခဲဓါတ်တွေဘယ်နားမှာ စုနေသလဲဆိုတာကို ရှာပြီးတောမှုကုသမှုပေးဖို့ပါ။ တကယ်လို့ ဖယ်ထုတ်ပစ်လို့မရဘူးဆိုရင် ပိတ်ဆို့ထားရပါမယ်။ သင့်ဒေသမှာရှိတဲ့ ကျန်းမာရေးဌာနတွေကို ခေါ်ပြီး ခဲဓါတ်တွေကိုဘယ်လိုဖယ်ထုတ်ရမလဲဆိုတာကို ပြောပါ။ သူတို့တွေက သင့်ကို ခဲဓါတ်တွေနဲ့ထိတွေ့မှုတွေကိုပါလျှော့ချပေးနိုင်မှာပါ။
အရမ်းဆိုးတဲ့အခြေအနေတွေမှာ chelation လို့ခေါ်တဲ့ကုထုံးကိုအသုံးပြ ုလို့ရပါတယ်။၎င်းကတော့သင့်ခန္ဓါကိုယ်မှာစုနေတဲ့ခဲဓါတ်တွေကို chelationလုပ်ခြင်းကနေ သွားပေါင်းပြီး ခဲဓါတ်တွေကို သင့်ဆီးထဲကနေ စွန့်ထုတ်ပေးပါတယ်။
အစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်းမှာရှိနေတဲ့ခဲဓါတ်တွေကို ပြ ုပြင်ထားတဲ့မီးသွေးဓါတ်တစ်မျိုးက သွားပေါင်းပြီး ဝမ်းသွားတဲ့အခါမှာ ခန္ဓါကိုယ်က ထွက်သွားအောင်အကူအညီပေးပါတယ်။ EDTAလို့ခေါ်တဲ့ဓါတ်တုဓါတ်တစ်မျိုးကိုလည်း အသုံးပြ ုလို့ရပါတယ်။
ဒီလိုတွေကုသမှုပေးခဲ့ရင်တောင် ခဲဓါတ်နဲ့ကြာရှည်ထိတွေ့မှုရှိခဲ့ပြီးသားဆိုရင် ပြန်ထုတ်ဖို့ တော်တော်ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။
အောက်မှာပြောပြမယ့်လူနေမှုဘဝပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနှင့် အိမ်တွင်းကုထုံးတွေကတော့သင့်ရဲ့ခဲဆိပ်သင့်ခြင်းကို ကူညီပေးနိုင်မယ့်နည်းတွေပါ။
ကစားစရာအရုပ်တွေရယ် လက်တွေကိုရယ်ရေဆေးပါ။ လက်ကနေတစ်ဆင့်ပါးစပ်ထဲကို ခဲဓါတ်ပါတဲ့ ဖုန်တွေ မြေကြီးတွေ ဝင်ရောက်တာကိုလျှော့ချနိုင်ဖို့အတွက် သင့်ကလေးတွေက အပြင်မှာဆော့ပြီးပြန်လာရင် အိပ်ယာမဝင်ခင်အချိန်တွေမှာ လက်ကလေးတွေကိုသေချာဆေးပေးဖို့လိုပါတယ်။
သူတို့ဆော့ကစားတဲ့အရုပ်လေးတွေကိုသေချာဆေးပါ။ ဖုန်တက်နေတဲ့နေရာတွေကိုသေချာသန့်စင်ပါ။ ကြမ်းခင်တွေကိုကြမ်းတိုက်ဝတ်နဲ့တိုက်ခြင်း ပရိဘောဂတွေ ပြတင်းပေါက်ဘောင်တွေနဲ့ တစ်ခြားဖုန်တက်တဲ့နေရာတွေကိုအဝတ်စိုနဲ့သေချာတိုက်ပြီးဆေးပါ။
အိမ်ထဲကိုမဝင်ခင်မှာ ဖိနပ်ချွတ်ပါ။ အဲ့လိုမှပဲခဲဓါတ်ပါရှိမယ့်မြေကြီးတွေကိုအပြင်မှာချန်ခဲ့နိုင်မှာပါ။
ရေအေးအေးကိုဖွင့်ထားပါ။ တကယ်လို့သင့်အိမ်မှာက ခဲဓါတ်ပါတဲ့ရေပိုက်တွေ ဘေစင်အဟောင်းတွေသုံးနေပါက အဲ့ထဲကရေကိုမသုံးခင်မျာရေကို အနည်းဆုံး၁မိနစ်လောက်ဖွင့်ထားပြီးတဲ့နောက်မှသုံးပါ။ ရေပိုက်ကလာတဲ့ရေပူကို ကလေးနို့ဖျော်ဖို့တို့ဒါမှမဟုတ် ချက်ပြ ုတ်စားသုံးဖို့အတွက်အသုံးမပြ ုပါနဲ့။ ကလေးတွေကိုမြေကြီးတွေပေါ်မှာမဆော့ပါစေနဲ့။ ကလေးတွေအတွက်သဲတွေထည့်ထားပြီးသား နေရာလေး လုပ်ပြီးဆော့စေပါ။
မြေကြီးကိုကွက်လပ်မထားပဲ မြက်ပင်တို့အခြားအပင်တို့စိုက်ပါ။ ကျန်းမာမျှတတဲ့ အစားအစာမျုားကိုစားပါ။ ပုံမှန်အစားစားခြင်းနဲ့ ကောင်းတဲ့အာဟာရတွေက ခဲဓါတ်တွေစုပ်ယူခြင်းကိုလျှော့ချဖို့အားပေးပါတယ်။ ကလေးတွေအတွက်ကတော့လုံလောက်တဲ့ ကယ်စီယမ်ဓါတ် ဗီတာမင်စီနဲ့ သံဓါတ်တွေကို သူတို့အစားအသောက်ထဲမှာထည့်ကျွေးခြင်းနဲ့ ခဲဓါတ်စုပ်ယူမှုကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့အိမ်ကို စနစ်တကျ ပြ ုပြင်ထိန်းသိမ်းပါ။ တကယ်လို့သင့်အိမ်က ခဲဓါတ်ပါတဲ့အိမ်သုတ်ဆေးသုံးထားတာမျိုးဖြစ်ရင် ပုံမှန်သုတ်ဆေးတွေကိုခွာချပေးခြင်း ပြသနာတစ်ခုခုရှိရင်သေချာပြ ုပြင်ပေးခြင်းတို့ကို ချက်ခြင်းလုပ်ပါ။ သဲတွေနဲ့မလုပ်ပါနဲ့ ၎င်းက ခဲဓါတ်ပါတဲ့အမှုန်တွေကိုထုတ်ပေးလို့ပါ။
(တကယ်လို့သင့်မှာမေးစရာမေးခွန်းတွေရှိပါက သင့်ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ သင့်အတွက်ဘယ်အဖြေကအကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတာကိုသိနားလည်ဖို့အတွက်ပါ။)
Lead poisoning. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/lead-poisoning/home/ovc-20275050. Accessed July 19, 2017.
Lead Poisoning. http://www.mottchildren.org/posts/your-child/lead-poisoning. Accessed July 19, 2017.
Lead Poisoning. http://www.healthline.com/health/lead-poisoning#overview1. Accessed July 19, 2017.